Okuku | October 2021
Isi > Okuku
Izu abụọ izu nri
Izu 2 izu nri - otu esi edozi
Kedụ ka m ga-esi felata n’izu abụọ? N'ebe a, ndị ọkachamara ahụike na-ekerịta ndụmọdụ ha kachasị mma banyere otu esi adaba ibu n'ime izu abụọ. Chọghị nri nri n'etiti nri. Were HIIT. Kwụsị iri shuga. Na-arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala minit 30 kwa ụbọchị. Na-a ounụ ounce 64 nke mmiri. Nwee ụra zuru ezu. Họrọ dum nri. Rie ezigbo abuba.
usoro 1 alonso okuku
Usoro 1 alonso okuku - kedu ka ị si edozi
Gini mere ihe ọghọm Alonso? Naanị ụbọchị anọ ka ihe ọghọm ịgba ọsọ okporo ụzọ hapụrụ Alpine F1 ọkwọ ụgbọala Fernando Alonso n'ụlọ ọgwụ, a hapụla onye Spaniard ka ọ gaa n'ihu mgbake ya n'ụlọ, ndị otu ya ekpughere. Emechara ka ekpughere ya na ọ wara ịwa ahụ maka mgbaji agba n'agba ya, emesịa ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ maka nyocha.
bikemụ nwanyị ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè
Crashmụ nwanyị ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè - ka esi ekpebi
Hà hụrụ nwanyị kpatara ọgba aghara Tour de France? Mgbe ọ rịọchara ndị akaebe, a matala onye ahụ, chọta ya, ọ nọ ugbu a na ndị uwe ojii na Landerneau, ka RTL kwuru. Dabere na Reuters, ọ gbanwere onwe ya. E boro nwanyị nwanyị France nke 30 ebubo na ọ kpatara mmerụ ahụ na-ebute mmerụ ahụ ma chee ntaramahụhụ nke euro 1,500. 30. 2021.
julian alaphilippe okuku
Julian alaphilippe okuku - otu esi edozi ya
Gịnị mere Julian Alaphillipe? Julian Alaphilippe ahapụla Tour de Suisse ịlaghachi n'ụlọ maka ọmụmụ nke nwa mbụ ya na onye na-agba ọsọ mbụ na onye na-ekwu okwu telivishọn Marion Rousse, ndị otu Deceuninck-QuickStep ekwenyela. 12. 2021.
ngwa ngwa okuku
Swift crash - otu esi edozi
Kedu ka m ga-esi daa na Swift? Nwalee ya pụọ ​​Pịa play_arrow Mee wee mepụta atụmatụ dị ugbu a na Xcode iji wuo ngwa gị na ngwaọrụ ma ọ bụ ihe nkedo. Pịa kwụsị Kwụsị atụmatụ ma ọ bụ ihe omume na Xcode iji mechie ihe mbụ nke ngwa gị. Mepee ngwa gị ọzọ site na simulator ma ọ bụ ngwaọrụ.
concorde okuku metụtara photos
Concorde okuku metụtara photos - olee otu idozi
Onye nwụrụ ihe ọghọm metụtara Concorde? Akụkụ ụfọdụ nke Concorde dabara n'akụkụ akụkụ nke ụlọ oriri na ọ hotelụ theụ ahụ, wee gbuo ụmụ akwụkwọ Poland abụọ ahụ, Eva Lipinska na Paulina Sypko, na ụmụ nwanyị na-elekọta ụlọ na Kenza Rachid na Devranee Chundunsing.
Ugbo ala igwe kwụ otu ebe - ihe eji enyere mmadụ aka ime ihe
Kedu ihe na-eme mgbe ịnyịnya ígwè kụrụ ụgbọ ala? Ihe ọghọm ịnyịnya igwe nwere ike ịgụnye mmebi dị ukwuu nke ọrụ agba agba ụgbọ ala gị, yana mmebi ahụ nke dents na ahụ nke ụgbọ ahụ. Ọtụtụ mgbe, mmebi ahụ na-efu ihe karịrị ego onye na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịkwụ n'akpa. Inye mkpuchi ụgbọ ịnyịnya ígwè agaghị ekpuchi mmebi nke ụgbọ gị.
geraint thomas okuku
Geraint thomas okuku - ngwọta na-eme ihe
Gini mere Geraint Thomas jiri daa? Geraint Thomas tufuru mmeri mbụ ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ mgbe ọ zụrụ ma daa na ihe na-erughị mita 50 fọdụrụ na Stage 4 nke Tour de Romandie. Thomas kwuru na-agbanwe agbanwe gears ufọt ufọt n'ikpeazụ bụ ihe mere ka ọ daa. 2 2021.
okporo ụzọ ugboelu okuku
Okporo ụzọ ọgba tum tum - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m daa igwe kwụ otu ebe? Ọ bụrụ n’ịchọta onwe gị n’ọnọdụ iyi egwu ndụ, kpọọ 911.Chọta Ebe Nchekwa. Atụla ụjọ. Lelee Ahụ Gị. Lelee isi gị. Okuku-Ugbo-ala Ugbo ala. Lelee igwe kwụ otu ebe gị. Ozugbo Homelọ Nwere Nchekwa. Were oge gwọọ gị.